Izindaba - Imakethe yezimoto i-Asynchronous ukukhulisa imali engenayo ngombono omuhle
Imakethe yezimoto i-Asynchronous ukukhulisa imali engenayo ibheke okuhle
Uhlobo lwakamuva lwesifundo semakethe se-2020 ku-Asynchronous Motor Market equkethe i-103 enamathebula wedatha yemakethe, amashadi, amagrafu, namanani okulula ukuwaqonda ngokuhlaziywa okujulile okukhonjisiwe.
Ubhubhane lweCoronavirus (i-COVID-19) luthinte zonke izingxenye zempilo emhlabeni jikelele. Lokhu kuholele kuzinguquko eziningana ezimweni zemakethe. Umbiko uhlanganisa isimo esishintsha ngokushesha emakethe kanye nokuhlolwa kokuqala nokwesikhathi esizayo komthelela.
Imoto ye-asynchronous, ebizwa nangokuthi i-induction motor, iyimoto eshintshashintshayo yamanje. Ikhoyili ye-stator isebenzisa ukufakwa kwe-electromagnetic ukukhiqiza manje ku-Rotor, futhi imoto ikhiqiza i-torque, ngakho-ke awekho odonsa unomphela. Ama-motor asynchronous angahlukaniswa amakheji amagesi kanye namakheji ezinkonkxa ngendlela yama-rotor windings. Uhlobo olujiyayo luyisigaba sesithathu semoto, kanti uhlobo lwekhehla lesikwele lunemikhakha emithathu kanye nesigaba esisodwa. I-Rotor ye-squirrel cage induction motor ingaxhunyaniswa nokujikeleza kwangaphandle kwenjini.
Ngokocwaningo nokutadisha, imakethe ixazulule ubukhona bayo emhlabeni wonke. Ucwaningo lwe-Asynchronous Motor Market Research lunikeza ukuhlolwa okuphelele kweMakethe futhi kuqukethe ukuthambekela kwesikhathi esizayo, izici zokukhula kwamanje, imibono egxile, imininingwane kanye nedatha yemakethe eqinisekisiwe yomkhakha.
Abadlali beMakethe Yomhlaba Wonke, abazobe bevela futhi banqobe u-2020 eMakethe Yezimoto Ezinamandla
Ukubheka ku-2020, imakethe yomhlaba kulindeleke ukuthi ibe unyaka obalulekile kwi-Asynchronous Motor Market maqondana nokukhula kanye nemali engenayo.
Cishe zonke izinkampani ezifakwe kuhlu noma ezifakiwe zifanele ukuthuthukisa izicelo zazo zokuhlangenwe nakho kwabasebenzisi bokugcina nokusetha izisekelo zazo zaphakade ngo-2020. Lo mbiko ugxile futhi wagxila kulezi zinkampani ezibandakanya iBosch Rexroth, ISIEMENS, TATUNG, Emerson, SHANDONG HUALI, ABB , STOEBER, GEORGII KOBOLD, SERVAX, TECO, Wolong, HITACHI, Bonda Industry, Dazhong, ANHUI WANNAN, YASKAWA, JLEM, Jiangte, JJE, SchabmÃ¼ller, AMK, HEIDENHAIN, XEMG, SPG, Ydmotor, Dongming, MOTOR -Beloit, ABM Greiffenberger.
Ngaphezu kwalokho, ucwaningo lunikela ngokuningiliziwe okuningiliziwe kokuhlukaniswa kwezinga lesifunda okuhlukaniswe njengendawo okungaholela kuyo ukukhula kwezinga lokukhula, amazwe anesabelo semakethe esiphakeme kunawo wonke esimweni esedlule nesamanje. Okunye ukwahlukana ngokwendawo okufakwe ocwaningweni yiNyakatho Melika (Kumbozwe eSahlukweni 7 no-14), e-United States, eCanada, eMexico, eYurophu (Kumbozwe eSahlukweni 8 no-14), eJalimane, e-UK, eFrance, e-Italy, eSpain, ERussia.
Njengoba isibikezelo semakethe ye-Asynchronous Motor sokwandisa i-CAGR% ngo-2020 futhi i-XXXX kufanele ibe ngumzuzi omkhulu, ibekwe kahle kuneZZZZ yango-2020.
Ukugeleza kwezigaba zebhizinisi ezintsha kuyangqongqoza ngonyaka we-2020 we-Asynchronous Motor Market
Ngokuya ngocwaningo lwemakethe ye-AMR, izitayela zakamuva kwizigaba zemakethe ezithandwa ngabathengi ezinjengohlobo, uhlelo lokusebenza luzoba yinselelo enkulu. Ukuthengiswa kwengxenye yemakethe ye-Asynchronous Motor kuzonqamula uphawu lwe- $$ ngo-2020.
Ngokungafani nezigaba ezihlukanisiwe eziphumelele embonini efana noHlobo (Izigaba ezintathu ze-Asynchronous Motor, i-Single-phase Asynchronous Motor) kanye ne-End-Users / Application (Machine Tools, Small Rolling, Equipment, Pumps, Light Machinery, Metallurgical, Mining Machinery, Abanye).
Uhlobo lwango-2020 lwesifundo semakethe ye-Asynchronous Motor luhlukaniswe phakathi / lincishisiwe ukugqamisa ukuguquka kwamuva komkhakha.
Ukuziphatha kwabathengi nokushintsha okuncamelayo, Izinkampani ze-Asynchronous Motor zivuma kanjani?
Ngenxa yoshintsho ezintweni ezithandwa ngabathengi ngokubuyekezwa kokuthunyelwe kwakamuva kokuthengiswa nemali engenayo, abathengisi abakhulu eMakethe ye-Global bazama ukunakwa ngabasebenzisi bokugcina noma abathengi "ngeminikelo nangezinye izinsiza".
Ngokusebenzisa ubuchwepheshe bamuva nokuhlaziywa ohlangothini lokufunwayo, abadlali abangoKhiye bangena ekuziphatheni kwabathengi nasekuthandeni kwabo okuguqukayo.
Futhi, amafemu amakhulu wokutshala imali noma ama-giants azimisele ukubeka imali ethe xaxa ukuthola ukusebenza komdlali ophambili emakethe yezinhlelo zokusebenza ezintsha noma imikhiqizo.
Izinhloso Zokucwaninga Nenjongo
Ukubuza nokuhlola usayizi wemakethe ye-Asynchronous Motor ngezifunda / amazwe abalulekile, uhlobo lomkhiqizo nokusetshenziswa, idatha edlule kusuka ku-2014 kuya ku-2018, nokulinganisa noma ukubikezela ku-2026.
Ukwazi ukwakheka kwe-Asynchronous Motor Market ngokubona izingxenye zayo ezingaphansi.
Ukugxila kubadlali bemakethe abaphambili be-Asynchronous Motor, ukuthola, ukuchaza nokuhlaziya inani, isabelo semakethe, indawo yokuncintisana kwezimakethe, ukuhlaziywa kwe-SWOT, nezinhlelo zentuthuko eminyakeni embalwa ezayo.
Ukuhumusha imakethe ye-Asynchronous Motor maqondana nezindlela ezithile zokukhula, amathemba, kanye negalelo labo emakethe ephelele.
Ukwabelana ngemininingwane eningiliziwe ngezinto ezibalulekile ezinomthelela ekukhuleni kwemakethe (amandla okukhula, amathuba, abashayeli, izinselelo kanye nezingcuphe eziqondene nomkhakha).
Ukwenza iphrojekthi usayizi we-Asynchronous Motor Market, maqondana nezifunda ezibalulekile, uhlobo nezinhlelo zokusebenza.
Ukuchaza ngentuthuko yokuncintisana njengokukhuliswa, izivumelwano, ukwethulwa kwemikhiqizo emisha nokutholwa emakethe nokunye okuningi.
Ukuhlaziywa Komthelela we-COVID-19 ku-Asynchronous Motor Market
Siyabonga ngokufunda le ndatshana, ungathola futhi isahluko ngasinye isigaba esihlakaniphile noma izinguqulo zemibiko ezihlakaniphile ezifana neNyakatho Melika, iNtshonalanga / iMpumalanga Yurophu noma iSoutheast Asia.
Ngemininingwane yemakethe enikeziwe, Ucwaningo lweMakethe Yezwe Lonke lunikezela ngokwezifiso ngokwezidingo ezithile. Bhalela i-AMR
Isikhathi Iposi: Nov-09-2020